नेपाल आज | पौडेल काङ्ग्रेस सिध्याउन उद्ध्त
पौडेल काङ्ग्रेस सिध्याउन उद्ध्त
आइतबार, ०८ चैत २०७७ गते प्रकाशित - Vijay Singh
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) नेताद्वय महन्थ ठाकुर र बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कमा शनिबार बिहान पत्रकार ऋषि धमलासँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा पौडेलले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निकास दिनुपर्ने बताए ।
देउवालाई महन्थ ठाकुर र बाबुराम भट्टराईमध्ये एकलाई प्रधानमन्त्री बनाएर कांग्रेसलाई जसपाको पुच्छर बनाएर सरकार बनाउन पौडेलले सुझाव दिएका हुन् ।
जसपाका नेताद्वय भट्टराई र ठाकुरले भारतप्रति झुकाब राख्ने गरेको आरोप लाग्दै आएका बेला पौडेलले नै उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका छन् ।
देउवाले कांग्रेसले नेतृत्व नपाउने हो भने पार्टीलाई अरु दलको पुच्छर बनाएर सरकारमा जाने सम्भावना नरहेको बताइरहेका बेला नेता पौडेलले ठाकुर र भट्टराईमध्ये एउटालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । पौडेलको यो प्रस्तावले कांग्रेसलाई कमजोर बनाएको भनेर पार्टीभित्र नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ ।
पौडेलले भनेका छन्, ‘महन्थ ठाकुर र बाबुराम भट्टराई जो प्रधानमन्त्री बने पनि हुन्छ । फलानो व्यक्ति भन्ने छैन । कांग्रेसकै नेतृत्वमा भए पनि हुन्छ । जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा भए पनि हुन्छ । यो र उसको भन्ने कुरा छैन ।’
नेता पौडेलले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको दाबी नगर्न सुझाव दिएका छन् । उनले देउवाले प्रधानमन्त्रीमा लोभ नदेखाउने हो भने निकास निस्कने बताएका छन् ।
‘सभापति शेरबहादुर देउवाले निकास दिनुपर्छ’, पौडेलले भने, ‘आफू बनेर भए पनि वा अरुलाई बनाएर पनि निकास दिनुपर्छ । देउवाले बिकल्प दिनुप¥यो ।’
नेता पौडेलले नयाँ सरकारका विषयमा भनेका छन्, ‘सरकार मैले दिने होइन । म संसदमा छैन । संसदमा भएका साथीहरूले दिने हो । पार्टीको संसदीय दलको नेताले दिने हो । पार्टीको सभापतिले दिने हो, सरकार । पार्टीको सभापति र दलको नेताको जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारी उहाँले पूरा नगर्ने, म बाहिर बसेको मान्छेले कसरी पूरा गर्ने ?’
नेता पौडेलले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वभन्दा पनि अरु दलहरूलाई नेतृत्व दिएर सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा गर्न तयार हुने मात्र कुरा होइन । परिआयो भने नेतृत्व गर्ने र अर्कोलाई दिएर भएपनि यो संसद बचाउन पर्छ’, कांग्रेस नेता पौडेलले भने, ‘जनता समाजवादी पार्टीलाई तपाईहरूले लिएर भए पनि आउनुस् मिलेर गरम्, उनीहरूले संसदलाई कारगर बनाऔँ । हामीले पुनःस्थापन गरेर ल्याएको संसद यसलाई उपयोगी बनाउन प¥यो ।’
‘यो प्रणालीको रक्षा गर्नुप¥यो । संविधानको रक्षा गर्नुप¥यो । संविधान, संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रको रक्षा गरौँ । हामी बने पनि बन्ने, तपाई बने पनि बन्ने’, उनले भने, ‘सरकारको बिकल्प दिऔँ । केपी ओलीको बिकल्प दिनुपर्छ भनेर हाम्रो नेतृत्वले भन्नुपर्छ ।’
पौडेलले भनेका छन्, ‘ओली इतर सबै मिल्नुपर्छ । त्यसमा जसले जसलाई नेतृत्व स्वीकार गरे पनि केही छैन । ओली इतर मिलेर, ओलीको सत्तालाई ओलीको बहिरगमनलाई प्रधानमन्त्री पदमा राखिरहन हुँदैन । ओली इतर मिलेर उनलाई हटाउनुपर्छ ।’
उनले भने, ‘जनता समाजवादी पार्टीका केही नेता र हाम्रै पार्टीका केही नेताहरूले के गरेका हुन् । हलो अड्काएका छन् । यिनीहरू कसको भनाइमा लागेका हुन् ? यही नै बुझ्न गाह्रो भयो ।’
‘देशको राजनीतिले जे मागेको छ नेतृत्वले त्यो कदम चाल्नै पर्छ’, पौडेलले भने, ‘मैले शेरबहादुर जीलाई वा अर्को जीलाई बनाउन लागेको छैन । म सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो ।’
कांग्रेसका नेताद्वय कृष्णप्रसाद सिटौला र डा.शेखर कोइरालाका पछिल्ला अभिव्यक्तिप्रति आक्रोशित देखिएका नेता पौडेलले अहिले चुनाव हुन नसक्ने बताएका छन् । पौडेलले कृष्णप्रसाद सिटौला र डा.शेखर कोइरालालाई मुख सम्हाल्न पनि चेतावनी दिएका छन् ।
‘संसदले समाधान दिनुपर्छ । हतरपतर नयाँ जनादेश नयाँ जनादेश भनेर यहाँ गिरिजाप्रसादका फलोअर्स हुँ भन्नेले पनि त्यस्तो भनेको सुन्छु म । कसरी हुन्छ चुनाव ? कहाँबाट हुन्छ चुनाव ?’, कृष्णप्रसाद सिटौला र डा.शेखर कोइरालाप्रति लक्षित गरेर पौडेलले भनेका छन् ।
‘केपी ओलीको नेतृत्वमा देशलाई चलाउने भनेको अदालतमाथि अपमान गर्नु हो । संविधानमाथि गरेको खेलवाड गर्नु हो’, उनले भने, ‘लोकतन्त्रमाथि उपहास गर्नु हो । नेपालको राजनीतिक नैतिक धरातललाई ध्वस्त पार्नु हो । केपी ओलीलाई अहिले समर्थन गर्नु मिल्दैन ।’
‘केपी ओलीले समर्थन गरेर अहिले हिँड्नेले राजनीतिक नेतृत्व गरे, देश लोकतन्त्रको नेतृत्वको नेता हुँ भन्न मिल्दैन’, पौडेलले भनेका छन् ।
नेता पौडेलले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आफूले सम्झिरहेको बताएका छन् । ‘सम्झनुपर्नेले सम्झिएका छैनन् । मैले सम्झी राखेको छु’, उनले भने, ‘मैले गिरिजाप्रसादको लाइनलाई जहाँसुकै प्रमोट गरिरहेको छु । उहाँको लाइनअनुसार देशको राजनीतिमा अडान मैले लिएको छु ।’
‘गिरिजाप्रसादले जसरी विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापन गरेर त्यसबाट समस्याको समाधान गराउनुभयो, म पनि पुनःस्थापन गरेर यसबाट देशको समस्याको समाधान पार्लियामेन्ट्री प्रणालीको रक्षा गर्ने काममा लागेको छु’, उनले भने, ‘मैले गिरिजाप्रसादलाई बिर्सिएको छैन । अरुहरूले बिर्सिएका छन् । चुनाव–चुनाव भन्नेहरूले पार्टीको नयाँ जनादेश–नयाँ जनादेश भन्नेहरूले गिरिजालाई बिर्सिएका छन् ।’